Gini mere igwe ese eji achapu anya nyere ndi ochichi aka? - OMG Ngwọta
A kọwapụtara teknụzụ dị ka ntọala nke nkà, ihe ọmụma, ma ọ bụ ihe eji eme ihe site na ihe ndị siri ike iji ruo otu njedebe; Ma n'ihe banyere nchekwa, gịnị bụ njedebe ahụ? Odi nkpa na iwepu mpụ, n’agbanyeghi, ihe okike ya emetutaghi ya n’ikpe azu.
Kemgbe mmalite nke akụkọ ihe mere eme, mmadụ ahụ achọwo ịgafe ihe mgbochi nke amaghị ihe na nke a emeela ka ọ bụrụ ihe dị mkpa gbasara teknụzụ, mana ọ dị mkpa maka ọganihu na-esote, dịka wiil, ọla, wdg.
Igwefoto ahụ bụ ihe ndekọ edepụtara iji yikwasị uwe ndị uweojii na-ahụ maka iwu, na-enye ihe ndekọ ọdịyo nke ọdịyo site n'echiche nke onye ji ya, na ngosipụta nke ọrụ ya.
Ndị ọrụ mmanye iwu na-eji igwefoto vidiyo (CVC) dekọọ ụda na onyonyo n'oge oge ihe omume yana mmekọrịta nke ndị otu ọha, ndị akaebe na ndị a na-enyo enyo iji ha emechaa dịka nyocha na iji kpokọta ihe akaebe. Ederede ejiri CVC tinye uru na ihe akaebe anakọtara; Ekwesighi ile ha anya dika isi mmalite nke ihe akaebe.
Sistemụ HVAC nwere obere igwefoto agbakwunyere uwe onye uwe ojii ma ọ bụ ugogbe anya maka anwụ ma ọ bụ eyi dị ka okpu agha, nke na-edekọ ụda na onyonyo n'oge onye uwe ojii na-emekọrịta ihe n'etiti ọha na eze. Ihe ndekọ ederede dijitalụ edere edekọ si na onye ọrụ ahụ wee hụ ọrụ ya.
Ezubere CAC ka o doo anya ihe ndekọ nke ga-enye ihe ndabere dị mma, nke na-enweghị aha ọ bụla nke ihe omume metụtara ndị otu ụlọ ọrụ mmanye iwu. Ebumnuche nke omume a bụ iji mee ka nghọta doo anya na ịza ajụjụ ma ọ bụrụ na ajụjụ ebilite ma ọ bụ nchegbu ga-ebilite ebubo n'ihi ihe merenụ, ma nye ihe akaebe maka ebubo ma ọ bụrụ na ihe ahụ mere. aghaghi ime ihe mpụ.
Ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka iwu mebere ọmụmụ ihe ga-ekwe omume iji CVC nke gụnyere nyocha nke ọma gbasara nsogbu nzuzo dị mgbagwoju anya na okwu iwu ma ọ bụ iwu. Ngwa CAC na teknụzụ na-agbagharị ngwa ngwa, ndị ụlọ ọrụ ahụ na-enyochakwa iwu, usoro na akụrụngwa ha mgbe niile iji hụ na arụmọrụ mmebe iwu kacha dị irè. Akụkụ a nke ọrụ gụnyere nyocha na ọrụ ndị na-akwọ ụgbọ mmiri iji nwalee teknụzụ ọhụrụ. Ebumnuche nke ụlọ ọrụ mmanye iwu bụ inye ndị otu dị n'ihu na teknụzụ dị elu na ngwaọrụ mgbasa ozi iji bulie ikike ha nwere ịzaghachi ihe ndị ọhụrụ ma na-ejide nchekwa nke ọha na ndị uwe ojii.
Nnwale ndị ahụ mekwara ka a mata njirimara CAC nke ọma iji chọpụta ihe ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanye iwu na-eme site na ikwughachi ihe ndị metụtara iji ike. Dabere na njirisi nyocha na oke enyere site na ndapụta ekwughachiri, enwere ike ilekwasị anya na mgbanwe dị iche iche metụtara akụkụ niile nke iji ike eme ihe iji chọpụta ebe kachasị mma iji debe igwefoto na onye uwe ojii na-arụ ọrụ ya yana njirimara CVC ga enwerịrị iji mezuo ihe achọrọ maka nchịkọta nke akaebe.
Ndị uwe ojii na-eji teknụzụ ọhụụ eme ka ndị uwe ojii na ndị ọha na eze ha na-emekọrịta ihe ọ bụla. CVC na-enye nghọta zuru oke na ịza ajụjụ maka ndị niile metụtara ya ma gosipụta ihe osise dị iche iche banyere ihe ndị uwe ojii na-ezute mgbe ọnọdụ siri ike ma sie ike. Ihe omume dị ka nke a nwere ike ịtụle ma chọpụta uru agbakwunyere ngwa ọrụ ndị uwe ojii ọhụụ. Dịka ndị uwe ojii nke oge a, ndị ọrụ mmanye iwu na-enyocha ma na-enyocha teknụzụ ọhụụ mgbe niile iji mezuo iwu ya ichebe ndị nkịtị. Ebumnuche nke usoro a ka dị otu - inye ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanye iwu ngwaọrụ ha chọrọ iji merie nsogbu ndị metụtara ọnọdụ ndị uwe ojii ugbu a na gburugburu na-agbanwe agbanwe.
Achọpụtara ihe egwu dị na nzuzo n'oge Nnyocha Mmetụta Nzuzo (PIA), na aro ndị na-esonụ ka enyere ha aka ịkwụsị ha:
Ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka iwu ga-emepụta amụma iji hụ na njigide, mkpofu, na nchekwa nke ndekọ emere site na CVC;
Ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka iwu agaghị edekọ mmekọrịta ya niile na ndị otu ya;
Mgbe ndị otu ụlọ ọrụ ji CVC rụọ ọrụ n'iwu nke ọrụ ha, ha ga-eme ya n'ihu ọha
Dị ka o kwere mee n’ụzọ aghụghọ, ndị otu na - ahụ maka ndị na - eme iwu ga - adụ ụmụ amaala ndụmọdụ ma ha see vidio;
Na ngwụsị nke ngbanwe ọ bụla, a ga-ebugo vidiyo vidiyo gaa na ụlọ ọrụ nchekwa ngwaọrụ echekwara maka ngosi, njigide na mkpofu;
Mụ amaala nwere ike ịrịọ ka ha hụ ozi nkeonwe ha. Enwere ike ịdenye arịrịọ maka ịnweta aha CAC nke emere n'okpuru Iwu Nweta Iwu na Iwu Nzuzo site na ibe weebụ ATIP.
A ga-agwa ndị mmadụ ọhaneze iji CACs, ọkachasị na mwepu ebe etinye foto, yana ndị otu na-ahụ maka ndị mmanye iwu na-agwa ha banyere atumatu na omume kacha mma na nke a.
A na-eji CAC iji kpokọta ihe akaebe maka nchọpụta mpụ na iji mejupụta ndị ọrụ mmanye iwu na-akwado iwu mmekọrịta site na ịkwalite ụlọ nchekwa na obodo ndị nwere nchebe n'ofe mba ahụ. Ojiji nke CAC ga-akwadokwa iwu ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanye iwu iji gbochie mpụ, nyochaa mmejọ, kwado udo na ịdị n'usoro, ịmanye iwu, na itinye aka na nchekwa mba. , iji hụ na nchekwa nke ndị ọrụ gọọmentị, ndị bịara ileta ha, na ndị nnọchi anya mba ofesi, yana iji nye ndị ọrụ mmanye iwu ndị ọzọ ọrụ nkwado. Mgbe gị na ndị mmadụ na-emekọrịta ihe, ndị otu ga-eji CACs mee ihe masịrị ha, dabere na amụma mmekọrịta ọha na eze. Ndị ọrụ mmanye iwu na-agba mbọ ichebe ozi nkeonwe anakọtara ma na-enyocha usoro ya na usoro ya iji hụ na ha rube isi n'iwu gọọmentị etiti.
Nzuzo 6419 3 Echiche Taa